समाचार - स्कोफोल्डिंग सहायक उपकरण, निर्माण मचान, लेदर स्कोफल्डि,, गैल्वनाइज्ड स्कोफोल्डिंग पाइप, जस्ती इस्पात पाइप, शो ट्रस, कार्यक्रम स्टेज, चाइना स्काफोल्डि,, चाइना स्काफोल्ड, लिफ्टिंग स्काफोल्ड, सुरक्षात्मक स्क्रीन, क्लाइम्बिंग स्काफोल्ड, स्कोफोल्ड कपलर, स्काफोल्डिंग फास्टनर,
सानो कास्टि,, ठूलो भिन्नता! हामी पानीको गिलास प्रक्रिया प्रयोग गर्न किन जिद्दी गर्दछौं? (२)
अन्तिम समाचारमा हामी यसको मूल्यको बारेमा कुरा गर्छौं पानी गिलास कनेक्टर यो बालुवा कास्ट कनेक्टरको २ गुणा हो।
त्यसो भए ,धेरै साझेदारहरू अलमल्लमा पर्नेछ, किन हामी अझै पानी गिलास प्रक्रिया छनौट गर्नुहोस्?
मलाई तपाईं बालुवा कास्टका केहि समस्याहरूको बारेमा बताउन दिनुहोस् जडानकर्ताहरू हालको बजारमा:
० खराब उपस्थिति
एकातिर उपस्थिति गुणस्तर उत्पादको समग्र उपस्थिति हो गरीब, अधिक प्रत्यक्ष, खातिर यसमा चुहावट प्लेटिon घटनाको एक धेरै हुनेछ जस्ती प्रक्रिया, किनभने को सतह एकदम नराम्रो छ, यो हुनेछ उत्पादको सेवा जीवन घटाउनुहोस्।
०२।धेरै आन्तरिक pores
आन्तरिक pores को समस्या मुख्यतया दुई पक्षहरुमा प्रकट हुन्छ:
१) pores को मूलमा अवस्थित छ योजक, जो हुनेछ कारण वेल्ड सीममा pores र पाइप संग वेल्डिंग जब वेल्डिंग को गुणस्तर असर गर्छ;
2) pores को अस्तित्व को को समग्र शक्ति कम गर्दछ योजक, लाई नोक्सान पुर्‍याउँदै योजक र सम्पूर्ण को स्क्र्याप परिणामस्वरूप लेजर.
03.mm धेरै बुर, कमजोर आयाम सटीक नियन्त्रण
धेरै बुरर्स योजक न केवल उपस्थिति गुणस्तरमा असर गर्दछ, तर अपरेशनको बखत श्रमिकको खरोंचलाई पनि असर गर्दछ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो पनि असर गर्दछखडा गर्दै। यदि बुरहरू छन्हटाइएको छैन र निर्माण गरियो समय मा, वेल्डिंग पछि समग्र गुण हुनेछ मानक पूरा गर्न सक्दैन, जसले उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षालाई असर गर्दछ।
हाम्रो अनुभव अनुसार पानी गिलास कनेक्टर कास्टिंग मोल्डिंगमा प्रक्रिया, एक मोल्डिंग हो, समग्र संरचना तुलनात्मक रूपमा स्थिर हुन्छ; बालुवा कास्टको प्रक्रियामा योजक, मोल्डहरू अलग गरियो।
माथिको कारणको आधारमा, अधिक र अधिक ग्राहकहरूले छनौट गर्छन् पानीको गिलास योजक उच्च एकाई मूल्यको साथ।